TCDD waxay qaataa naafo iyo shaqaalo dowladeed hore loo soo qabtay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTCDD wuxuu helaa naafanimo iyo shaqaale hore loo xukumay
30 / 01 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, Shaqooyinka, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, TURKEY, TCDD
Tcdd waxay soo iibsataa shaqaalaha naafada ah ee naafada ah
Hay'adda TCDD ayaa ku dhawaaqday in shaacinta rasmiga ah ee ay soo saartay Agaasinka Guud ee naafada iyo shaqaalihii hore ee dembiilayaasha loo xukumay inay shaqeeyaan.
General Directorate of Maamulka Tareennada State la dhawaaqay by naafada ah iyo dembiilayaasha, oo ay ku jiraan guud ahaan 5 (shan) ka dhigay in la sameeyo dadweynaha by shaqaalaha qaadashada horyaalka Railway Line Shaqaalaha Dayactirka. Faahfaahinta soo-dhoweynta waa sidan soo socota.
shaqaalaha dadweynaha 3 la naafo doonaa (saddex) TCDD xnumx.bölg guud shaqaalaha Agaasinka Manisa Road Dayactirka Supervisor dadka 3 334, 1. 7 dadka iyo 724 ee xarumaha dayactirka wadooyinka 1 ee gobolka Afyonkarahisar. Madaxa dayactirka waddada 6 ee gobolka 634 waxaa lagu iibin doonaa iibsigiisa.
2 (laba) Taariikhda dayactirka tareenka ee adeega dadweynaha ee horey loo xukumay waa 3. Gobolka Basmane 311 1 (One), 7. 724 waxaa loo sameyn doonaa sida 1 (hal qof) oo loogu talagalay madaxa agaasimaha dayactirka waddada Afyonkarahisar XNUMX.
Iibsasho lagu sameyn doonaa at heerka qalin-jabisa dugsiyada hoose iyo sare ee February 05 2019 Turkey waa la qaadi doonaa oo ku saleysan tixraac ku dhawaaqay by Agaasinka Agency shaqada.
codsiyada au TEO dhigay ka dib markii musharaxiinta liiska la abuuri doonaa in ay ka qayb toogashada ama imtixaanka afka awoodin in la sameeyo ka hor dadweynaha a notary on 19 February 2019 TCDD General Directorate of Human Resources Department Anafartalar Hippodrome Cad. No. 3 Çankaya / cinwaanka Ankara yimid, Railway Line Dayactirka Repairers ee xamuulka iyo rakaabka ee dokumentiga ka abuuritaanka muujinaya in inta badan bilood 6 ka shaqeeya shaqo dayactir nidaamka tareenka iyo dayactirka wada sameeyey, shahaado, shahaado of adeeg ciidan barashada, samatabbixin doonaa waraaqaha document Maxaabiis hore oo loogu talagalay dembiilayaasha.
TCDD si loo baaro aqbalaadda naafanimada iyo dib-u-dallacsiinta iibsashada Riix halkan. (Qoritaanka dadweynaha)
TCDD waxay shaqaalaysiisey shaqaalaha hore ee mujrimiinta
TCDD ayaa qoreysa dambiilayaal hore!
Soo iibsiga Shaqaalaha Dadweynaha TCDD
TCDD Iibsashada shaqaalihii hore ee dembiilayaasha la xukumay
Soo iibsiga TCDD ee Shaqaalaha Dadweynaha La Xukumay
qorista shaqaalaha tcdd
Shirkadda Scotty Oo Isticmaalaysa 45 Million Minutes of Traffic
UTIKAD ayaa wax ka beddeli doonta qaybtan "Next"